Dubbe iyo Doolaal duqay weeye magaalo oo dalkooda ilaasha.
Shahaadad Shiqib By A. GeeljireDubbe iyo Doolaal duqay weeye magaalo oo dalkooda ilaasha. Waa laba aan kala daalin dariiqna aan wada qaadin. Midba duubka wanaagga dushaasuu ku sitaa iyagaaba is doortay.Waa laba aan debec yeelan oon hadal diirkaba saarin deelqaafna wuu ka dhacaa. Haddana inay is dilaan iyo dudmana loogama yaabo. Waa niman aan dan ka yeelan dadka kay ku arkaan waxay diidan yihiin ee duunkoodu la yaabo derejo uu doono ha yeeshee, kay daafacayaanna inta daaqsinta geela looga soo durki maayo. Ruuxay diiraddoodu haleesho daguugahay ka dhigaan dembina loo qabsanmaayo oo duqoodi Dhanxiirbaa digreetadaa u saxeexay ducana waabu u raacshay. Bartay doodda jilba iyo foodda ay is daraanna waa Danlaawoow mafrishkooda oo ay qadadii dabadeeda iyo duhurka ay ku kulmaan.Doolaal:Waar miyaanad maanta salaaddii ciidda iman kugumaan arage?Dubbe:Mayee waanigii imi inkasta oo aan yara habsaamay. Laakiin maxaa inaga raacay dee; sheekheenii wanaagsanaa ee Adan Siiro wuu maqnaaye.Doolaal:Muu maqanayn ee waakii ina tukiyay ee khudbadda inoo jeediyay.Dubbe:’ar meel kalaad malaa tagtaye sheekhii ma joogin ee biyahaa soo riix hadda.Doolaal:Allaylehe adigaa meel kale tegey.Dubbe:’aar beryahaaba waanu ku qarinaynay ee gurigaagaad ka ambataaye biyaha na sii dee.Doolaal:’aar ma iminkaad sheekhii aanu shanta tallaabo u j irnayna nagula murmaysaa ee aanu indhahiisa wiilkooda arkaynay dhowaan daraadeed.Dubbe:Wallah? Dee haddaa malaa sameecad meel kale laga soo duway baa ii dhoweyd. Mid baasoo i ag fadhiyayna waa igu raacay isna. Nin kale ayaan anigu khudbaddiisii dhegeystay hadaa.Doolaal: “soo bax baa la leeyahay oo ay sacabka leefaysaa.? kumaad dhegeysatay waaba isagii baanu ku leenahay.Dubbe:Ma ninkii siyaasadda ka hadlayay ee lahaa saddex nin oo indho la’ baa isku keen haysta iyo isbedel doonka iyo waxaa ka hadlayay baa sheekheeni mujaahidka ahaa wanaagsanaa ahaa? Dee waanu ahayn?Doolaal:Weger. Iska wado laguu tag heli maayee. Yaad dhegeysatay haddaa?Dubbe:Anigu waxaan dhegeystay Professor As-hari,ninkii sheegan jiray guddoomiyaha Isbedel doonka Subeyr Awal. Ilaahay ha ka aqbalee sheekhu Xajkii buu tegey baa la yidhi.Doolaal:Wallaahi, waa tii boqolle lagaga tegi jiray eh sheekhii baa hadlayay.Dubbe:Iga walla haddaanad iminka iigu dhaaran weligay layma soo mariyeen. Ma sheekhan khayrka Ilaahay siiyay ee dadka caawiya ee dadka u dhexda ahaa ee xataa kuwa dhinta xabaalaha u iibiya ee naxashka iyo xafaajiyada bilaashka u siiya ee Baxsaneba iska fadhiiso yidhi ayaa madaxda aflagaadeeyayay baad leeday. Sheekhu ma sideenuu mafrish jooga bal waxaad ku hadlayso day. Laakiin sawdiga dhaartay. Dee haddaa sheekhu waanu lacagaystay eh ma xagga siyaasadda ayaa loo soo hayaa? Iska daayoo manta waa maalintaynu shahaadda sannadka ee hadalxumida bixin jirnay.Doolaal:Dee adigu is sii yaa kaa hadal xun adiga.Dubbe:Waar xukuumaddan dadkuba shahaadaha siinayaan baa kuwanna u baahan ee dhegeyso. Horta sannadkii ina dhaafay shahaadadda waxaa ku gulaystay raggan:1. Mudanane Daahir Rayaale Kaahin: “Ictiraaf looma baahna ee dhaqaalaha ayaa ka muhiimsan” buu yidhi markuu Kuwait waxoogaaga ka soo qaatay sheekha. Mar kale oo uu is lahaa Budhcadbadeeda ayaa lacag lagu heleyaana wuxuu ku yidhi nin gaal ah oo waraystay oo weydiiyay inuu shirka budhcadbadeedda ee Nairobi kaga hadli dooni qaddiyadda ictraafka Somaliland. “maanta ma aha maalin calan iyo safaarad iyo waxaa laga hadlo ee budhcad badeedda ha nalaga caawiyo.”2. Mudane Siciid Sulub: “markaanu Axmed Siilaanyo rasaasaynay ayay nabaddii soo noqotay.” Ayuu BBC da ka yidhi maalintii 15May ee madaxda Kulmiye la tacshiiradeeyay. Markalena wuxuu yidhi. “SNM dadkii ay laysay baa loo haystaa.”3. Cali Warancadde: “Daahir Rayaale distoorka ha loo furo mar saddexaad oo aan Djibouti ku dayano.”4. Cawil: “Isaaq wuu is dilayaa haddii Daahir Rayaale la dooran waayo.”5. Jamac Biin: “rag baa sidoodii kabaha afka ku qaadi.”6. Qanayre Afrax, waxaan u jeedaa Maxamed Cabdi Daud: “Guddidayada Nabadgelyadu waa Distoori mar haddaan guddoomiye mid ka noqday.”7. Xaaji Cabdi Waraabe: “Habar Jeclooy haddaad caddaalad rabtaan horta dhinta, Aakhiro ayay caddaaladi jirtaa.”8. Idrisi Kiiloo: “Adhigeena duniduba ma rabto oo waa toban kiiloo.”9. Ina Saleebaan Weyne: “SNM kubka iyo bawdada ayaa lagaga jabay.”10. Oday,Garaad Xaabsade: “Meeshatan wax la kala doortaa haddeer ma jiraan.” Mar la weydiiyay xisbigee ayaad ku biiri doontaa.11. Ina Dhoolayare(beeraha): “sidii gafanaha ayaanu uga soo go’nay hantidii umadda.” “Kumanaan jago ayaa la lunsaday oo Ina Rayaale bixiyay ee Ciidagalow maxaa jagadaydan yar ee Masalaha iigu qabsanaysaan?”12. Cirro: “Kulmiye ayaa Guurtida qarxiyay.”Waa inoo Qoraalka xiga. Haddii Eebbe idmo.A. Geeljire
shankarooniNovember 30, 2009 at 1:33 PMMa Sheekh Adan siiro ayaad leedahay wa Habar awal isbadal doon ah? Han ku fahmo, hada ma waxaad leedahay ninki habar awal ee naca kali talisnimada iyo jileeca xisbiga kulmiye ma shambada qabiikla ayad saaraysa?Walee daljiro wax ka hadal xun iyo ka cuqdad badan inaan arag!ReplyDeleteAdd commentLoad more...
MIDNIMO - CADDAALAD - HORUMAR
The Voice Of Somaliland diaspora-Ottawa
IN THE NAME OF ALLAH, THE COMPASSIONATE AND THE MERCIFULPREAMBLEIN PURSUANCE of the resolutions of the Conference of the Somaliland Communities held in Burao on 27th April to 5th May 1991, which reaffirmed (our) independence with effect from 18th May 1991;NOTING that the Conference of the Elders of the Somaliland Communities held in Borama from 24th January to 25th May 1993 adopted a National Charter which:- laid down that a national constitution which will replace the national charter be prepared and consulted upon within a year; (and)- set out clearly the constitutional principles and the governmental structures, confident in their communities’ inalienable right to decide their destiny;HAVING experienced the direconsequences of the application of a constitution not grounded on the nation’s beliefs, culture and aspirations, as was the case for a period of thirty years;HAVING experienced the devastation wrought by a regime based on dictatorship and a policy of divide and ruleto which the country was subjected for over twenty years, and ever vigilant of the return of such a regime;REMEMBERING the series of struggles waged by the people, such as that of the “Darawiish”, religious leaders and political parties;MINDFUL of the vigorous campaign led by the patriotic organisation, the SNM, which culminated in the reassertion of (our) independence which was achieved through sacrifice of life and property so that the nation can enjoy a governmental system which meets its needs;............. Continue here
SOMALILAND COUNCIL OF MINISTRIES Sugaan & Gabayo
Dubbe iyo Doola...
Yaa iiga Horreeyay 2
DALJIRE - Yaa iiga Horreeyay